Ngokuvamile, abaduni noma abagaxekile bashintsha okuqukethwe kwakho kwewebhu kanye nama-athikili ngokwabo. Ngokwesibonelo, amanye amawebhusayithi wezindaba ahlaselwa, futhi okuqukethwe kwabo kwezombangazwe kufakwe esikhundleni sezindaba ezihlobene nobuphekula. Abaduni bavele baqhayise ngokuthi bahlasele amasayithi akho futhi awukwazi ukwenza lutho ukufihla lokho abakwenzile. Noma ubani ovakashela isayithi lakho uzokwazi ukuthi isayithi lakho likhishwe. Isibonelo sesayithi elichasisiwe livulekile i-opennet.net. Kubantu abaduni abenza okuqukethwe kwakho nge-propaganda, iwebhusayithi yakho yindawo yokukhangisa mahhala.